Ciidamada Maraykanka oo sugaya Amarka Trump ee ah weerar lagu qado Iran ka dib madaafiic lagu garaacay militariga Maraykanka | Caalamka.com
Home CAALAMKA Ciidamada Maraykanka oo sugaya Amarka Trump ee ah weerar lagu qado Iran...
Ciidamada Maraykanka oo sugaya Amarka Trump ee ah weerar lagu qado Iran ka dib madaafiic lagu garaacay militariga Maraykanka
Wasaarada Gaashaandhiga Mareykanka ayaa sheegtay Iran ay in ka badan 10 madfac xalay ku garaacday laba saldhig oo uu millatariga Mareykanka ku leeyahay dalka Ciraaq, kuwaas oo la sheegay in ay ahayd aargudashadii Janaraalkii uu maraykanka ku dilay ciraaq.
war ay soo saareen Ciidamada kacaanka Iran ayay ku sheegeen in uu si guul ah ku dhamaaday weerar ay sheegeen in ay ku qaadeen saldhigyo Mareykanka ku leeyahay Ciraq.
Waxa kale oo warka ka soo baxay lagu sheegay in duqeyntaasi loogu aargudayay jeneraal Qassem Soleimani oo ay todobaadki hore Mareykanka ku dileen duqeyn cirka ah xilli uu marayay meel u dhaw garoonka diyaaradaha ee Baghdad.
Afhayeenka Waaxda difaca Maraukanka ee loo yaqano Pentagon Jonathan Hoffman ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ay cadahay in ay ka dambeeyso Iran “Waa ay caddahay in gantaalladan laga soo tuuray Iran, islamarkaana lagu beegsaday saldhigyada Mareykanka ee al-Assad iyo Erbil.”
Illaa iyo hadda ma jiraan wax war ah oo laga heli karo khasaaraha iyo waxyeellada soo gaartay Ciidamada Maraykanka
donald Trump oo qoraal soo dhigay bartiisa Twitterka ayaa sheegay in ay wax walo hagaasan yihiin uuna warsaxaafadeed ka soo saari doono duqaynta ciidamada Iran ee saldhigyada maraykanka ku lee yahay ciraaq, lama oga waxa ay ku danbayn doonto xiisada dib ulaba kaclaysay.